Waaxda Maareynta Kobaca Ganacsiga Waaxda Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|U adeegida Bulshooyinka|Maareynta Kobaca
Hadafka Adeegyada Maareynta Kobaca (GMS) waa in la caawiyo lana hago dawladaha hoose, hay'adaha gobolka, iyo kuwa kaleba si loo maareeyo koritaanka iyo horumarka, si waafaqsan Xeerka Maareynta Kobaca (GMA).
GMA waxaa loo ansixiyay si wax looga qabto siyaabaha loo waafajin karo koritaanka. Waxay u baahan tahay in magaalooyinka iyo degmooyin si xawli ah u koraya ay u dhammaystiraan qorshayaal dhammaystiran iyo xeerar horumarineed si ay u hagaan koritaanka mustaqbalka. Dhamaan awoodaha maamulka waxaa looga baahan yahay inay ilaaliyaan aagagga deegaanka ee muhiimka ah ayna ilaaliyaan dhulalka kheyraadka dabiiciga ah, sida beeraha iyo keymaha. GMA waxay ugu baaqeysaa jaaliyadaha inay dib u eegaan oo, hadii loo baahdo, dib u eegis ku sameeyaan qorshayaashooda iyo xeerarkooda sideedii sanaba mar si loo hubiyo inay la jaanqaadaan.
Adeegyada aan bixinno: Caawinaad Toosan, Deeqo, Tababar iyo Waxbarasho, Buugaagta Tilmaamaha, Dib u eegista gobolada iyo magaalooyinka talaabooyinka fulinta GMA ee la soo jeediyay, Isuduwida Gobolka si loo fududeeyo howlaha hay'adaha gobolka ee la xiriira GMA iyo adeegyada dawladaha hoose, Barnaamijka Abaalmarinta Bulshada ee Gudoomiyaha Gobolka.
Shaqaalaha Maareynta Kobaca Shaqaalaha Xiriirka Macluumaadka iyo Khariidadda Kaalmada Gobolka
GMA Qorsheynta Buuxda iyo Qeybta Qorsheynta Degmooyinka Khariidadda
Wasaaradda Ganacsiga ee Gobolka Washington (Ganacsiga) ayaa u magacaabi doonta ilaa toban magaalo ama degmooyin Guddiyada Horumarinta Gaadiidka (TIB) “Abaalmarinta Wadooyinka oo Dhamaystiran”. Codsiyada la dhammaystiray magacaabistu waxay elektaroonig ahaan ugu habboon tahay ganacsiga Oktoobar 1, 2021. Macluumaad dheeri ah fadlan la xiriir Kirsten Larsen lambarka (360) 280-0320 ama Kirsten.larsen@commerce.wa.gov Xuduudaha awooda leh ee hadda jira 10,000 ama ka yar ayaa lagu dhiirigelinayaa inay codsadaan. TIB waa inay sameysaa abaalmarinta deeqda ugu dambeysa (inta udhaxeysa $ 100,000 iyo $ 1,000,000) Janaayo 2022.
Adeegyada Maareynta Kobaca waxay dib-u-eegis iyo cusbooneysiin ku sameynayaan xeerarka maamulka ee Xeerka Maareynta Kobaca. Wixii macluumaad dheeraad ah booqo bartayada EZ View: Sharciga Maareynta Kobaca WAC Cusboonaysiinta
Buug-tilmaameedka Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington: Dhiirigelinta Horumarinta Saameynta Yar (LID) Shuruudaha Ogolaanshaha Waxay soo bandhigaysaa qaabab ay dawladaha hoose ugu dhiirrigelin karaan kuwa horumarineed inay si iskood ah ugu daraan LID mashaariicda xarumaha kobcinta magaalooyinka. Macluumaad dheeri ah…
Xeerka Habka Caafimaadka Hab dhaqanka
Waaxda Ganacsigu waxay soo saartay xeer qaanuun ah bishii Juun ee 2021 si ay u caawiso goobaha maxalliga ah goobaha caafimaadka hab-dhaqanka bulshada ku salaysan. Fadlan dooro tan link si aad u hesho macluumaad dheeraad ah iyo inaad akhrido xeerka moodeelka iyo xirmada aaladda isgaarsiinta ee dheeraadka ah.
Macluumaadka Cusboonaysiinta Waqtiga GMA
Degmo kasta iyo magaalo kasta oo gobolka ka mid ah waxaa looga baahan yahay inay sameeyaan casriyeyn xilliyeed. Kheyraadka la heli karo: Buugga Tilmaamaha, Jadwalka Cusboonaysiinta, Liisaska Hubinta ee Degmooyinka iyo Magaalooyinka.
Jadwalka Koorsada Gaaban, Buug-tilmaame, Tababar loogu talagalay Sharciga Kulamada Dadweynaha Furan, Video Koorso Gaaban
Loogu talagalay qorsheeyeyaasha, gudiga qorshaynta, saraakiisha la soo doortay, iyo xubnaha bulshada si ay wax uga bartaan noocyo isugu jira maadooyin qorshaysan oo waqtigooda iyo khuseeyaba ah, ka hel warbixin cusub hay'adaha gobolka iyo federaalka arrimaha la xiriira dhulka.
Ugudbinta alaabada Gobolka si dib loogu eego
Degmo kasta iyo qorsheynta magaalada ee hoos timaadda GMA waxaa looga baahan yahay inay ogeysiiso Ganacsiga markii ay qaadanayso ama ay si joogto ah wax uga beddelayso qorshayaasheeda dhammaystiran iyo / ama xeerarka horumarinta.